रसियाले २०२२ को विश्व कप खेल्न नपाउने ! - Merodesh.news
१० मङि्सर २०७७, बुधबार
रसियाले २०२२ को विश्व कप खेल्न नपाउने !
एजेन्सी, २३ मंसिर । सन् २०१८ को विश्व कपको होस्ट राष्ट्र रसियामाथि ४ वर्षको प्रतिबन्ध लागेको छ । वर्ल्ड एन्टी–डपिङ एजेन्सी (वाडा)ले रसियामाथि चार वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले जनाएको छ । चर्चित खेल समाचार पोर्टल ‘अल फुटबल‘ले रसियामाथि प्रतिबन्भ लागेको समाचार सम्प्रेषण गरेको छ ।
यस प्रतिबन्धसँगै रसियाले २०२० को टोकियो ओलम्पिक र २०२२ मा हुने कतार विश्वकप खेल्न नपाउने भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको लाउसानेमा बसेको वडाको मुख्य समितिको बैठकले रसियामाथि चार वर्षको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
यसबारे रसियाले २१ दिनभित्र प्रतिबन्ध हटाउनका लागि अपिल गर्न सक्ने बताइएको छ ।
काठमाडौं २४ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताएका छन् । उनले साग सफल भएकोमा खेलाडी, खेलप्रेमीलगायत सबैलाई शुभकामना समेत दिए[...]
भुटानलाई हराउँदै नेपालले जित्यो स्वर्ण
काठमाडौं, २४ मंसिर । नेपालमा तेस्रो पटक आयोजना भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा नेपालले स्वर्ण पदक जितेको छ । १३औं सागअन्तर्गत मंगलबार भएको फाइनल खेलमा भुटानलाई २-१[...]
भुटानविरुद्ध नेपालले फेरि बनायो अग्रता
काठमाडौं, २४ मंसिर । नेपालमा जारी १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)अन्तर्गत पुरुष फुटबलको स्वर्णका लागि नेपाल र भुटानले खेलिरहेका छन् । स्वर्णका लागि भएको भिडन्तमा नेपालले अन्डरडग भुटानविरुद्ध अग्रता बनाएको[...]